amin’izao fotoana izao izy io ary ny lamina momba ny fampandrosoana ny firenena amin’ny fotoana aoriana. Momba ny ady amin’ny valanaretina dia natao hitily ny olana ara-pahasalamana eny amin’ny fiaraha-monina, mampita ara-potoana any amin’ny CCO ny tranga mampiahiahy. Momba ny lafiny sosialy indray dia famoahana ny lisitry ny tokantrano misitraka ny tohana ara-tsosialy, miandraikitra ny rindran-damina ankapobeny amin’ny fizaràna izany. -Aiza no hapetraka? Manerana an’i Madagasikara manontolo. Amin’izao dingana fanombohana izao dia ireo Faritra telo (3) mampihatra ny fepetra fihibohana no hanombohana azy. Tahaka izao manaraka izao kosa ireo manana andraikitra ao anatin’ny rafitra : Solombavambahoaka/Lehiben’ny Distrika/ Ben’ny Tanàna : miara-miasa amin’ny Sefo Fokontany amin’ny fananganana ny rafitra (tsy manendry fa manara-maso na manao Supervision). Mpikambana mandrafitra ny Komity Loharano : miisa enina (6) fara-fahabetsany. Raha misy sehatra tsy ananan’ny Secteur/Fokontany iray solontena dia ireo solontena nampiarahina « sy/na » ireo no afaka mifameno.